Plantronics BackBeat Pro 2 - Review - News Ọchịchị
The Plantronics BackBeat Pro 2 wireless mkpọtụ-ịkagbu Igwe okwu ekweisi ndị a dị ezigbo mma ụzọ ekweisi, na-ewe afọ n'etiti ebubo, nwere ezi njikwa, siri ike ike mkpọtụ ịkagbu na a ụda profaịlụ nke ga-atọ ọtụtụ.
24 awa nke ndụ batrị, ezi njikwa na nza nke bass ga-ada oké ka ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ị na-akwado nke oge gboo music, anya n'ebe ndị ọzọ
Isiokwu a na-akpọ “Plantronics BackBeat Pro 2: Bose-larịị wireless mkpọtụ ịkagbu on a mmefu ego” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Wednesday 1st February 2017 08.30 UTC
Plantronics kwere nkwa n'elu-ọgwụgwụ mkpọtụ ịkagbu wireless ekweisi maka a-atọ ndị na-erughị ahịa isi, ma ọhụrụ BackBeat Pro 2s n'ezie anapụta?
The ọhụrụ BackBeat Pro 2s naanị a agafe otú ya na ha forbears. Gara bụ gburugburu udi na ihu ọma nke a ọzọ ergonomic oval na dabara gburugburu ntị kama na-emetụ n'ahụ ha n'akụkụ ụfọdụ.
Na ha bụkwa amụ na-ọzọ mfe, na mara ezigbo mma ukpụhọde na earcup ịnabata dị iche iche shapes nke isi. The otu ihe na ha adịghị eme bụ n'ogige atụrụ elu, naanị swiveling otú ahụ ka earcups nwere ike na-edina ewepụghị on a table, nke pụtara na ha na-enupụta nnọọ enupụta na-ebu gburugburu a akpa mgbe ị na-adịghị eji ha.
Ekpe earcup nwere a Central kwusi-play button, flanking track-Skip buttons na a jog wheel maka ukpụhọde olu. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ekpe earcup nwere a Central kwusi-play button, flanking track-Skip buttons na a jog wheel maka ukpụhọde olu. E nwekwara a mgba ọkụ na n'akụkụ na-enyo ma ọ bụ gbanyụọ ike mkpọtụ ịkagbu, ma ọ bụ na-azụ ndị noises nke n'èzí ụwa n'ime ekweisi na iji microphones - bara uru n'ihi na-ege ntị ọkwa on a ụgbọ okporo.
Nri earcup nwere microUSB odori n'ọdụ ụgbọ mmiri, ekweisi cable anya maka n'ige ntị wired, a ike mgba ọkụ na kwa anabata Bluetooth pairing a multi-ọrụ button maka akpali Google nnyemaaka ma ọ bụ Siri na a red okwu ogbi button maka mgbe on a oku na-aga.
Niile buttons na switches na-eche siri ike, mgbe olu jog Ịkpọ oku arụ ọrụ nke ọma. Ekweisi nwere ike kwụsịtụ music mgbe ị wepu ha na-amalite playback ọzọ mgbe ị na-etinye ha azụ gị ntị.
Plantronics BackBeat Pro 2 nyochaa – logo Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The ochie BackBeat Pro ekweisi nwere ọtụtụ bass, ma ọ otú ahụ belata mgbe mkpọtụ kagbuo e agbanwuru. The ọhụrụ Pro 2 ekweisi na-adịghị na-ata ahụhụ otu muting nsogbu kpatara ike mkpọtụ kagbuo. N'ezie, na ha nwere mara ezigbo zuru na ahazi bass - ihe karịrị ikwu na Bose QC35 - ma ha anaghị ụda gabiga ókè chụpụrụ site ya. The treble na ọnọdụ ndị dị mma na-adịghị mmiri riri si na bass dị nkọ na punchy kama apịtị.
Ndị na-achọ i kwesịrị isi na ma ọ bụ na-anọpụ iche ụda ga-mkpa anya n'ebe ndị ọzọ, ma ha dara oké ọbụna na ala mpịakọta mgbe nri electronica na ihe ọ bụla na a siri ike bass track. Rock tracks dị ka Eric Clapton si Layla dara oké, ma ihe dị ka Holst si Jupiter fùa a bit dulled na oghere-enweghị sparkle metụtara na i kwesịrị isi na ekweisi.
Mma na igbochi Ụzụ, ma ọ bụghị ukwuu ma ọ bụrụ na e nwere ihe a gbanyere mkpọrọgwụ n'obi ekwentị gburugburu. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The ike mkpọtụ ịkagbu dị irè na-ewepụ ihe drone nke engine mkpọtụ, ma bụ obere nke mere megide mberede ùzù nke a ekwentị aga ma ọ bụ yiri on a COMMUTER okporo ígwè. Nnukwu ihe dị iche n'etiti Pro 2s na ahịa-ndú Bose QC35 bụ n'ezie na ha anaghị ekwuli mkpọtụ igbochi - i nwere ike ịnụ ihe nke mkparịta ụka nke gbara gị gburugburu na Pro 2 n'isi-gi.
The Pro 2s ka nnọọ irè karịa karịa ọtụtụ ndị ọzọ rivals, dị nnọọ abụchaghị ndị gold ọkọlọtọ setịpụrụ ihe dị oké ọnụ QC35.
Tawa batrị hụ gị site na gị na-aga aga. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Plantronics udu na BackBeat Pro 2s dị ka ndị nwere 24 awa nke ndụ batrị, nke bụ ihe m nwetara na m na-ege ntị. Ha were izu n'ụzọ na-ege ntị na ụlọ ọrụ na mkpọtụ-ịkagbu arụsi ọrụ ike mgbe agbali-etinye uche ide. M chee na ha ga-adịru ọbụna aba na mkpọtụ ịkagbu ma ọ bụ site USB.
Nchaji via a microUSB cable were a dịtụ ogologo oge, ebe nke dị n'ógbè awa atọ site n'ụzọ zuru ezu ewepụghị, ma nyere 24 awa nke ndụ batrị, Echere m na ọ a siri ike ahia anya. Egbupụsị na a 30 nkeji ụgwọ bụ n'ezie zuru nnọọ ezu iji hụ gị site otu ụbọchị na-aga aga.
The siri ike ma kama keukwu ike ikpe. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The ikpe tara akpụ e nyere ndị ọzọ dị oké ọnụ "Ghaat" nsụgharị bụ ihe siri ike ma kama keukwu maka njem
The ọnọ analogue cable adịghị nwere igwe okwu ma ọ bụ music njikwa na ya
Bluetooth Njikọta bụ magburu onwe ofụri
The Plantronics BackBeat Pro 2 bụ ndị dị na abụọ nsụgharị, na Pro 2 na aja aja na-efu £ 220 na a na agba ntụ na a siri ike obubu ikpe n'ihi na £ 250.
Ha na-na ala na-eyi maka ruo ogologo oge na-ege ntị na-enwe ụfọdụ mara mma metụrụ dị ka auto-kwusi-play mgbe ị wepụ ha si gị isi. Ma ndị na-achọ ezi ụda na ihe ndị kasị mma na mkpọtụ igbochi anya ọzọ ebe.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a mma uru, mma-sounding na irè ụzọ wireless mkpọtụ-ịkagbu ekweisi, ị ga-aga n'ebe dị njọ na BackBeat Pro 2s.
Uru: dị nnọọ ogologo ndụ batrị, ala, ezi mkpọtụ ịkagbu, ezi bass, ezi njikwa, mma uru
Ọghọm: ụda profaịlụ agaghị ona onye ọ bụla, adịghị n'ogige atụrụ elu karịsịa ọma maka njem, n'ezinụlọ mkpọtụ kewapụrụ iche pụrụ ịdị mma
Bose QC35 wireless ekweisi: nanị unrivaled mkpọtụ ịkagbu
Philips SHB9850NC ekweisi review: mkpọtụ ịkagbu na-enweghị na-agbasa ihe akụ
Nkeji edemede, Digital music na audio, Ngwa, ekweisi, Nyocha, Samuel Gibbs, Technology
← Nintendo Gbanye: Gịnị Anyị na-atụ anya Site New njikwa Samsung Galaxy S8 na S8 + kpughere na 'ebighebi ngosi’ →